ရီပတ်ပလင်ကန်ပါတီ၏ အထောက်ကအပံ့ကို ရရှိရမည့် အစား ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် ဒီမိုကရက် လိုလားသူများစွာ၏ ထောက်ခံမှုများကို ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဒီမိုကရက်တစ်မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဖြစ်သူ Ed Koch၊ ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ဟောင်း Hugh Carey မြို့တော်အုပ်ချူပ်ရေး ကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူဟောင်း ဒီမိုကရက်တစ် တစ်ဦးဖြစ်သူ Peter Vallone နှင့် သူ၏ သားဖြစ်သူ ကောင်စီဝင် Peter Vallone ဂျူနီယာ၊ ယခင် ဒီမိုကရက်တစ် အထက်လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း Floyd Flake ( ၂၀⁠၀၁ ကတည်းက ဘလွန်းဘက်ဂ် အားထောက်ခံခဲ့သူ )၊ Bronx စီရင်စု/ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း Fernando Ferrer တို့ ဖြစ်သည်။
၂၀⁠၀၈ အောက်တိုဘာ ၂ နေ့တွင် မြို့တော်သက်တမ်း ကန့်သတ်ချက်ဥပဒေကို တိုးချဲ့ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နယူးယောက်မြို့ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းတွင် သူ၏ ဒေသအတွက် လိုအပ်သည့်ခေါင်းဆောင် တယောက် အဖြစ်ရည်ညွန်းပြီး ၂၀⁠၀၉ တတိယမြို့တော်ဝန်သက်တမ်းအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့သည်။ “ လိုအပ်သည့် အကူအညီများကိုအားဖြည့်ခြင်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် ငါတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတခုပဲ “ ဟု သတင်းအစည်းအဝေးပွဲတခုတွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ အဲဒါကြောင့် မြို့တော်ကောင်စီအနေနှင့် သက်တမ်းကန့်သက်ချက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက်ထောက်ခံအားပေး သင့်တယ်။ နယူးယောက်ပြည်သူတွေကိုလည်း ငါ့လုပ်ခဲ့တဲ့ ချုပ်ချယ်မှုကင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမှတ်တမ်းတွေကို ကြည့် ပြီးမှ ငါ့ကို နောက်ထပ်သက်တမ်းတခုအတွက် မဲပေးဖို့ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပြောချင်တယ်။”
၂၀⁠၀၈ အောက်တိုဘာ ၂၃ နေ့တွင် မြို့တော်ကောင်စီမှ သက်တမ်းကန့်သက်ချက် ဥပဒေကို ၄ နှစ်သက်တမ်း ၃ ကြိမ် ဆက်တိုက်အထိ တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ၂၉-၂၂ မဲဖြင့် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘလွန်းဘက်ဂ် အားမြို့တောဝန်ရာထူးအတွက် နောက်တကြိမ်ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ လူသိရှင်ကြား ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ၂ ရက်အကြာ နိုဝင်ဘာ ၃ နေ့ တွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် မှ ဥပဒေမှုကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် ၏ ပြိုင်ဘက်မှာ Democratic and Working Families Party မှ အဆိုပြုခြင်းခံရသူ Bill Thompson ဖြစ်သည်။ Bill Thompson သည် နယူးယောက်မြို့တော် ထိမ်းသိမ်းကြီးကြပ်သူအဖြစ် လွန်ခဲ့သော ရှစ်နှစ် ကတည်းက တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ထိုမတိုင်ခင်က နယူးယောက်မြို့တော်၏ ပညာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပက်သက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် ၅၀.၆ % မဲ ရရှိခဲ့ပြီး Thompson က ၄၆ % မဲ ရရှိခဲ့သဖြင့် ဘလွန်းဘက်ဂ် က မဲအသာဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
တသီးပုဂ္ဂလပါတီကို ၂၀၁ဝ ဇန်နဝါရီတွင် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးနောက် ၂၀⁠၀၉ အောက်တိုဘာ ၃ဝနှင့် ၂၀⁠၀၉ နိုဝင်ဘာ ၂ နေ့များတွင် သူကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးများထဲမှ ဒေါ်လာ ၆၀၀,၀⁠၀ဝ ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ တသီးပုဂ္ဂလပါတီသည် ထိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည့်ငွေထဲမှ ဒေါ်လာ ၇၅၀⁠၀၀ဝ ကို ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီမှ နိုင်ငံရေးသမား ဂျွန် ဟက်ဂါတီ ဂျူနီယာ ကို ပေးခဲ့သည်။
နယူးယောက်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ရှေ့နေချုပ် Cyrus Vance Jr. မှ ထိုကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် မရိုးသားမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ၂၀၁ဝ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ (၆၄) တသီးပုဂ္ဂလပါတီသည် Haggerty အား ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူများထံသို့ထိုပိုက်ဆံများကို မည်သို ပေးအပ်ခဲ့ သနည်းဟု စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း Matrin Connor က ဘလွန်းဘက်ဂ် ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုသည် တသီးပုဂ္ဂလပါတီ၏ အသုံးစရိတ်ကုန်ကျမှုကို ကူညီထောက်ပံ့ ပေးတာထက်လက်ရှိ ပါတီစည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုတခုဖြစ်ဖို့အတွက် လှုံဆော် ပေးလိုက်တာနဲ့ပိုတူတယ် လို့အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ Haggerty သည် ဘလွန်းဘက်ဂ် ၏ သီးခြားလှူဒါန်းမှုတခုဖြစ်သော ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀⁠၀ဝ ကို ရုံးခန်းနေရာအတွက် ထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် နယူးယောက် ၁၀၈ ယောက်မြောက် မြို့တော်ဝန်ရာထူးကို ၂၀⁠၀၂ ဇန်နဝါရီ ၁ နေ့ကစတင်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀⁠၀၅ ခုနှစ်တွင်ထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။ မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်တွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် အစပိုင်းတွင် လူထုထောက်ခံအားပေးမှုများ ရရှိအောင် အပြင်းအထန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်သူလူထုက သူ့အားတခဲနက် ထောက်ခံ အားပေးခဲ့ကြသည်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်များသည် ယခင်က လေးကြိမ်တိုင်တိုင် မြို့တော်ဝန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကို အနိုင်ရခဲ့သည်။ ( ဘလွန်းဘက်ဂ် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီမှ နုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး တသီးပုဂ္ဂလအမတ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဟု ၂၀⁠၀ရ ဇွန် ၁၉ နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သောကြောင့် ရလဒ်အနေဖြင့် ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီသည် သူ၏ ဒုတိယ မြို့တော်ဝန်ရာထူး သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် မြို့တော်ဝန်နေရာကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခံရမှု ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ )
လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းမှာ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတရပ်ဖြစ်ပြီး မဖြစ်မနေအသိ အမှတ်ပြုကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဘလွန်းဘတ်က သန္ဓေသားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်မပြုသူများအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောကြားပြီး သန္ဓေသားဖျက်ချခွင့်ကို ထောက်ခံ ထားသည်။ ၎င်းက Pro Life ဟု ခေါ်သော သန္ဓေသားဖျက်ချခွင့်ကို အသိအမှတ်မပြုလိုသော နိုင်ငံရေး သမားများအားထောက်ခံသည့် Pro Choice ခေါ် သန္ဓေသားဖျက်ချခွင့်ကိုထောက်ခံသူများအား ဝေဖန် လေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏ ဝေဖန်ချက်မှာ အထက်လွှတ်တော်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် Pro Life တဦးဖြစ်သူ Bob Casey ကို ထောက်ခံသည့် နယူးယောက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Chuck Schuner ကို ရည်ညွန်း လိုပုံရသည်။ ဘလွန်းဘတ်သည် မြို့တော်၏ လူမှုရေးပြသာနာအတော်များ⁠များနှင့် ပက်သက်၍မှု လစ်ဘရယ်ဖြစ်သော မှုဝါဒများ ကို ချမှတ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းက မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာပင်မကလပ်စည်းသုတေသနများကို အစိုးရက အထောက်ပံ့ပေး ရန်လိုလားပြီး ထိုကိစ္စကို မထောက်ခံသော ရီပတ်ဘလစ်ကန်များကို “ ကျိုးကြောင်း မသိသူများ” ဟု ပြစ်တင်လေ့ရှိ သည်။ လိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုလည်း လက်ခံသည်။ ထို ကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍ ၎င်း၏ ခံယူချက်မှာ မည်သူ ကမည်သူ့ကိုမဆိုလက်ထပ်ပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့တော်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေကို တင်းကြပ်စွာပြဋ္ဌာန်းရန်လိုလားသည်။ ယခင်ကမှု ၎င်းအနေဖြင့် လည်းဆေးခြောက်သုံးစွဲဖူးကြောင်း ၎င်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀⁠၀၁ က အင်တာ ဗျူးတခုတွင် “ခင်ဗျားတို့ သေချာပေါက်ပြောလို့ရတာက ကျွန်တော်ဆေးခြောက်သုံးစွဲဖူးတယ်။ ကြိုက် လည်းကြိုက်ခဲ့တယ်”ဟုဆိုလေသည်။ ထိုစကားကို Normal ၏ ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀⁠၀ဝ တန်သည်ဟု ဆိုကြ သော ကြေညာလှုံဆော်မှုတွင် ၎င်း၏ ရုပ်ပုံနှင့်တကွ ထည့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ၂၀⁠၀၂ အင်တာဗျူးတခုတွင် ဘလွန်းဘတ်က ဤကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းအတွက် နောင်တရမိ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ဆေး ခြောက်ကိုတရားဝင်သုံးခွင့်ပေးသင့်သည်ဟူသောအယူအဆကို လက်မခံတော့သူလည်းဖြစ်သည်။
ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ပက်သက်ပြီး ဘလွန်းဘတ်သည် သေဒဏ်ပေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်။ သေဒဏ်နှင့်ပက် သက်ပြီး ၎င်းက”တကယ်လို့များ ဥပဒေကခွင့်ပြုလျှင် လူတယောက်ကို အလွန်အကျွံသော့ခတ်ထားမယ်ဗျာ။ ပြီးတော့သော့တံကို ခပ်ဝေး⁠ဝေးမှာထားပြီးသူ့ကို အလုပ်ကောင်း⁠ကောင်းလုပ်ခိုင်းမယ်။ သေဒဏ်ပေးတာကိုတော့ ကျွန်တော် လက်မခံဘူး “ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျည်ဆန်ဖြည့်ထားသော သေနတ်တလက်ကို တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွက် သတ်မှတ်ထားသော မဖြစ်မနေကျခံရမည်။ အနိမ့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကို ၎င်း၏ သက်တမ်းအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုအပြောင်းအလဲနှင့်ပက်သက်ပြီး ၎င်းက “တရားမဝင်လက်နက်ရောင်းဝယ်သူတွေကို ဥပဒေအရထိုက်တန်တဲ့ပြစ် ဒဏ်ပေးဖို့သေသေချာချာဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပဲ။ ကျည်ဖြည့်ထားတဲ့သေနတ်ကို တရားမဝင်ကိုင်ဆောင်သူက လည်းထောင်ဒဏ်ကို သက်ညှာမှုမရှိပဲ ခံကြရမှာပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်ရာထူးကို ထမ်းဆောင်နေခဲ့စဉ် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြို့တော် ပညာရေးကို ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးက ဖွဲ့စည်းပေးထားသောဘုတ်အဖွဲ့၏ လက်အောက်တွင် ထားမည့်အစား မြို့ တော်ဝန်၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ဆရာများ၏လစာကို ၁၅%ခန့် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကာ မြို့ တော်အတွင်းရှိ ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးရမှတ်များနှင့် ပညာရေး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးမှုနှုန်းများလည်း တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများကို အရည်အသွေးမပြည့်မီပဲ အတန်းတက်ပေးခြင်းကို ဘလွန်းဘတ်က မလျော်ကန် သောလူမှုရေးလုပ်ရပ်အဖြစ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ပြီး ကျောင်းသားများမှာ နောင်တက်မည့်အတန်းအတွက် တကယ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှသာလျှင် အတန်းတက်ပေးသင့်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ထို့အပြင်ပညာရေးတွင် အများ နှင့်တန်းတူမလိုက်နိုင် သူများအတွက် ကျောင်းပြင်ပသင်တန်းများဖွင်လှစ်ပေးရန်လည်း စိတ်ထက်သန်သူဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဝန် အာဏာဖြင့် ကျောင်းတွင်ကလေးများ လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးစွဲခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို တုံပြန်ရာတွင် နယူးယောက်အနေဖြင့် တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် ၎င်းက “PlanNYC : A Greener, Greater New York ” ဟု ခေါ်သော ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို လျှော့ချရေးအစီအစဉ်တရပ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်နေသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၂၀၃ဝ အမီ နေရာပေးနိုင် သော အစီအစဉ်များရေးဆွဲခဲ့သည်။ အခြားမြို့တော်ကြီးများကိုလည်း နယူးယောက်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ကြရန် ဘလွန်းဘတ်က C – 40 မြို့တော်ကြီးများ ရာသီဥတု ထိပ်သီးညီလာခံတွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါညီလာခံတွင် ၎င်းက “ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာသည့် ကိစ္စဟာတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယရှင်း⁠ရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပြီးပြီ အခုအချိန်မှာ ပြသာနာကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ” ဆက်လက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန်၊ ပို၍ သန့်ရှင်းသော၊ ထိရောက်သော လောင်စာများကို သုံးစွဲရန်နှင့် အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်များကို ပို၍ သုံးစွဲကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်များမှာလည်း ထင်တိုင်း မပေါက်ပဲ အကောင်အထည်ပေါ်ရန် အခက်ကြုံရသည့်အခါလည်း ရှိသည်။ ဥပမာ မက်ဟန်တန်လမ်း ၆ဝ အောက် ပိုင်းတွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကို အခွန်ကောက်မည့် ကိစ်စအား နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိ လွှတ်တော်က ပယ်ချ လိုက်သည်။
ဘလွန်းဘတ်သည် ၁၉၇၅ တွင် ယော့ရှိုင်းယားသူ ဆူဆန်ဘရောင်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထိုပထမဆုံးဇနီးနှင့် သမီးနှစ်ဦးဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့မှာ ဘဲမာ ( ၁၉၇၉ ) နှင့် ဂျော်ဂျီယာနာ ( ၁၉၈၃ ) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသမီးနှစ်ဦးကို Born Rich ဟု အမည်ရသော ကျိကျိတက်ချမ်းသာသော သူကြွယ်သူဌေး၏ သားသမီးများအကြောင်းရိုက်ကူးထား သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘတ်သည် ဆူဆန်ဘရောင်းနှင့် ကွာရှင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘဏ်လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဒိုင်ယာနာတေလာနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ် နေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဘလွန်းဘတ်သည် Solomon Brothers ကုမ္ပဏီနှင့် စီးပွားဖက်များဖြစ်လာပြီး ငွေချေးစာချုပ်အရောင်းအဝယ် လောကသို့ဝင်ရောက်ကာ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းများရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ တွင် ထို ကုမ္ပဏီနှင့်လမ်းခွဲခဲ့ပြီးအလုပ်ထွက်ရသည့်အတွက် နစ်နာကြေး အဖြစ်ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်းရရှိခဲ့သည်။ ထိုငွေများကို အသုံးပြုကာ Innovative Market Systems ဟု အမည် ရသော ကုမ္ပဏီတခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ တွင် Merrill Lynch က ဘလွန်းဘတ်၏ ကုမ္ပဏီ၎င်း စတင်ဆက်ဆံသောဖောက်သည်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဘလွန်းဘတ် အကူအညီဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဈေးကွက်သစ် ပေါင်း ၂၂ ခုသို့လုပ်ငန်းဖြန့်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီတွင် ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ ဝင်ရောက်မြုပ်နှံသူ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီကို ၁၉၈၆ တွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် LP ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ အထိ ထိုကုမ္ပဏီကချဲ့ထွင်ခဲ့သောဈေးကွက်သစ်ပေါင်း ၅၀⁠၀ဝ ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဘလွန်းဘတ်၏ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း Boomber Trodebook, the ဘလွန်းဘက်ဂ် Messaging Source ခေါ် ဘလွန်းဘတ်သတင်းအချက်အလက်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မီဒီယာအဖြစ် ဘလွန်းဘက်ဂ် သတင်းဌာနကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ရေဒီယိုလိုင်းတခုကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ပြီး နယူးယောက်မြို့တော်အတွက် 1133 VVBBR – AM မှထုတ်လွှင့် လျက်ရှိသည်။ နယူးယောက် မြို့တော်ဝန်အဖြစ် နိုင်ငံရေးလောကသို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ဘလွန်းဘတ်က ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်၎င်း၏ နေရာသို့Lex Fenwick က ဆက်ခံ ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ကို ယခင်ဘလွန်းဘတ်၏ လက်အောက်တွင် ဒုတိယမြို့တော် ဝန်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သော Dan Doctorff က ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
“ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ငွေရေးကြေးရေးမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်တွေ ကြေအောင်မဆပ်နိုင်မည့် ဘဏ္ဍာရေးလိုငွေပြတာတွေ မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ငွေအကုန်အကျနည်း⁠နည်းနဲ့ ဘယ်လိုများထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆို တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖို့ပါပဲ။ အခွန်ကို လျှော့ပေးနိုင်တဲ့အခါ လျှော့ပေးမယ်။ လျှော့ပေးဖို့လည်း လိုအပ်နေတယ် ဆိုရင်ပေါ့။ ဘတ်ဂျတ်ကို ဝင်ငွေထက်ငွေညိုဖို့လိုလာတဲ့အခါလည်း အခွန်ပြန်တိုးချင်တိုးလာမယ်။ ဒီလို အခွန်တိုး ကောက်တိုင်းမှာလည်း ရလာတဲ့အခွန်ငွေကို ကျစ်⁠ကျစ်လျစ်လစ်နဲ့သုံးစွဲမယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘဏ္ဍာရေးပိုငွေပြ လာရင် ငွေစုမိသွားမယ်။ ပိုလာတိုင်းမဖြုန်းဘူးပေါ့။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ငွေရေးကြေးရေးမှာ ကွန်ဆာဗေးတစ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စီးပွားရေးအကျတွေကို မလွဲသာမရှောင်သာ ကြုံလာရင် ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားနိုင်အောင်ပဲ။ အခုပဲကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအကျနဲ့ကြုံနေရပြီဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ အားလုံးတွေ့နေရတယ်”
သို့သော်လည်းကောင်း၏ အီရတ်စစ်ပွဲများအပေါ် အားတက်သရောထောက်ခံမှုများနောက်ပိုင်းတွင် အတော်အတန်အားလျော့ သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ ၂၀⁠၀၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ၎င်းက “လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေကြေပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အီရတ်စစ်ပွဲကို စခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာ လူတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ နောက်တော့ ဒီလက်နက်တွေကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး” ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် အီရတ်မှ အမေရိကန်တပ်များရုပ်သိမ်းရန် ရက်သတ်မှတ်ရန် လွှတ်တော်တွင် ဆော်ဩနေ ကြခြင်းကိုမှု ဘလွန်းဘတ်က တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်ဟု ပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်သည်။ မြို့တော်ဝန်ဘလွန်းဘတ်က အထွေထွေနိုင်ငံတကာရေးရာ ကိစ္စအဝဝကို အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သည့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ခြားရေးကျွမ်းကျင်သူများ ခေါ်ယူထားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ်များ ….[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် ၂၀⁠၀၉ နိုဝင်ဘာတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် အရွေးမခံရစေရန် ဥပဒေများနှင့် ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် အနေနှင့် မြို့တော်ဝန်သက်တမ်းကုန်တာနဲ့တပြိုင်နက် ပရဟိတလုပ်ငန်းဘဝထဲကို ပြန်ဝင်မည်ဟု စိတ်ကူးထားကြောင်း မည်သို့ပင် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောစေကာမူ ယင်းအဖြစ်အပျက်သည် သူ၏ နိုင်ငံရေး အနာဂတ် အလားအလာများနှင့် ပက်သက်၍ ထင်ကြေး အမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ထို ရည်မှန်းချက် ပြည့်မှီရန်အတွက် သူသည် နယူးယောက် Manhattanအရှေ့ အပေါ်ပိုင်းရှိ နောက်ပိုင်းဋ်ဌာနရုံးများ ဖြစ်လာမည့် သူစီစဉ်ထားသော ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် Stuyvesant Fish မှ အဓိက တာဝန်ယူ တည်ဆောက်သည့် အဆောက်အအုံများအတွက် ၄၅ မီလီယံ ပေးချေခဲ့သည်။
၂၀⁠၀၈ သမ္မတရာထူးအတွက်ပြုလုပ်သည့် စည်းရုံးလှုံဆော်မှုများနှင့်ပက်သက်သော ထင်မြင်ယူဆချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀⁠၀၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ နေ့တွင် ၂၀⁠၀၈ သမ္မတရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ် ကြောင်းနှင့် ဘက်မလိုက်သည့် လမ်းစဉ်နှင့် တသီးပုဂ္ဂလအမတ်လောင်း တယောက်ကို ထောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀⁠၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ နေ့တွင် Dick Clark's New Year's Rockin' Eve TV show မှ သူသည် ၂၀⁠၀၈ သမ္မတရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မပြတ်သားမရေရာစွာဖြင့် ကြေညာထားချက်ကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ယခင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်သူလူထု သို့ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် ကသမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း မရှိဟု ငြင်းနေခဲ့သော်လည်း များစွာသော ဝေဖန်ရေးသမားများက ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် အနီးကပ်မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကြေငြလိမ့်မည်ဟု ၎င်းတို့ ယုံကြည်လောက်စရာ စည်းရုံးရေးဆင်း အဖြစ်အပျက်များ ကို ကိုးကား၍ ဝေဖန်ကြသည်။
၂၀⁠၀၈ ဇန်နဝါရီ တွင် Nebraska ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Chuck Hagel နှင့် ဂျော်ဂျီယာ အထက်လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း Sam Nunn တို့ပါဝင်သည့် ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နှစ်ပါတီပေါင်း (bipartisan) အုပ်စု ကို Oklahoma တက္ကသိုလ် တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါ နှစ်ဦးစလုံးမှာ အဓိက ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကို ရှေးရှုစေရန် နှင့် ပါတီအချင်းချင်း ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင် ပိတ်မိခြင်းများ မဖြစ်စေရန် ဖိအားပေးရန် အတွက် မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည် ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်များ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ပြသနေခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ ထို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းမှ ဘလွန်းဘက်ဂ် ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်အရွေးခံမည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက် ကို သက်သေပြစရာ ကြေညာချက် တစုံတရာ မပေါ်ထွက် ခဲ့ပေ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဆိုသည့် အချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အခြားသော လက္ခဏာရပ်များအနေဖြင့်… ၂၀⁠၀၆ နွေဦးတွင် ဗဟို နိုင်ငံရေး အယူအဆရှိဒီမိုကရက် ဦးဆောင်ကောင်စီ၏ Al From အုပ်စု နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရန် ပြင်ဆင်စရာများအကြောင်း ပြောဆိုရန် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် နှင့် ပြောဆိုပြီးနောက် Nebraska ပြည်နယ် ရီပတ်ပလင်ကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Chuck Hagel က အကြံပေးသည်မှာ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူနှင့် ဘလွန်းဘက်ဂ် တို့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေနှင့် အညီအမျှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ဖြစ်သည်။ ၂၀⁠၀၇ ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် ရုပ်သံသတင်းထောက် George Stephanopoulos က ဘလွန်းဘက်ဂ် နှင့် ထိပ်တန်း သမ္မတ ဝန်ထမ်းများ အကြားပြောဆိုခဲ့ကြသည့် နေရာတွင် ဆွေးနွေးသူ တစ်ယောက်အနေနှင့် ပါဝင်ခဲ့သူ Jay Carney မှ ပြောပြရတွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင် စရိတ်များနှင့် ပက်သက်၍ မေးနေခဲ့သည် ဟု ဖော် ပြခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးငြင်းပယ်ခဲ့ပေမယ့် ဘလွန်းဘက်ဂ် ရဲ့ သမ္မတဝင်ရောက်အရွေးခံခြင်း၊ မခံခြင်း ကိစ္စရပ်ဟာ မီဒီယာ ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ (November Newsweek ရဲ့ မျက်နှာဖုံး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အပါအဝင်) ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀⁠၀ရ ဒီဇင်ဘာ လျှို့ဝှက် ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဘလွန်းဘက်ဂ် က ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကဒ်ပြားတစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ နံပါတ်တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို မှန်းခိုင်းပြီး bingo ဂိန်း (နံပါတ်များပါဝင်သော ကဒ်ပြားများနှင့် ဆော့ရသည့် ကစားနည်းတစ်မျိုး) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Mr. ဘလွန်းဘက်ဂ် က ၂၇၁ နံပါတ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကို မေးလိုက်တော့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က မှန်ကန်စွာ အဖြေပေးလိုက်တာ ကတော့..၂၀ဝ ပြည့်နှစ်တုန်းက George W. Bush ရရှိခဲ့တဲ့ အနိုင်မဲ အရေအတွက် ပါ တဲ့။
၂၀⁠၀၈ ဇန်နဝါရီ ၁၈ တွင် Associated Press မှ သတင်းပေးပို့ချက်အရ ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် Texas ပြည်နယ်၊ Austin မြို့တွင် Ross Perot ၏ သီးခြားပါတီ မဲဆွယ်ပွဲများအတွက် မန်နေဂျာနှင့် လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ကျွမ်းကျင်သူ Clay Mulford နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် က တွေ့ဆုံပွဲသည် သူကိုယ်တိုင်အတွက် သမ္မတမဲဆွယ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်က ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူး။ ပို မရှင်းနိုင်သေးဘူးလား..ဘယ်စကားလုံးကိုများ နားမလည်တာ ရှိပါသလဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။ ၂၀⁠၀၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တွင် ဘလွန်းဘက်ဂ် က “သမ္မတရာထူးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်သူ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်လာမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ”ဟု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။ “လက်ရှိ မဲဆွယ်ပွဲများမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် နှင့် အမှီအခို ကင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ကမ်းလှမ်းနိုင်လျှင် စိန်ခေါ်မှုများအထိ ဖြစ်လာနိုင်ရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်” ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် အပိုင်းကတော့ မှန်ကန်၍ ရိုးသားသော ငြင်းခုံပွဲများကို ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ မြှင့်တင်ပြီး သူတို့ကို ရှေ့ရောက်အောင် လုပ်သွားဖို့ပါပဲ..။ သမ္မတ ရွေးချယ်ရေး ရွေးကောက်ပွဲ စတင်တာနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှပဲ ဘလွန်းဘက်ဂ် ဟာ ၂၀⁠၀၈ ခုနှစ်ရဲ့ ဒုသမ္မတ နေရာကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းစွပ်စွဲချက် တစ်ချို့လည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀⁠၀၇ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ ဘလောဂ် တစ်ခုတွင် The Politico သတင်းစာမှ Ben Smith မှ ဒုသမ္မတ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အနေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ့်ကို ကိုယ် ငွေကြေးအရ တာဝန်ယူပေးနိုင်ပါသလား ဟု မေးခဲ့ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အများစုက ယုံကြည်ထားသည်မှာ ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် ဒုသမ္မတ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနေနှင့် မိမိကိုယ်ကို ငွေကြေး တာဝန်ယူနိုင်ရန် တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိ လိမ့်မည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဘလွန်းဘက်ဂ် အနေနဲ့ ဒုသမ္မတ နေရာ ရရှိနိုင်ကြောင်း စွပ်စွဲချက်ကို မီးထိုး ပေးလိုက်တာကတော့ ၂၀⁠၀၇ ဩဂုတ်လ လယ် မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၎င်း ရဲ့ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်း Sam Nunn နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲများ နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ၂၀⁠၀၇ နိုဝင်ဘာ ၃ဝ နေ့ ဘားရတ် အိုဘားမား နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း တို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀⁠၀၈ မေ လ ၁ရ ရက်နေ့ ဂျွန်မက်ကိန်း နဲ့ အတူ မနက်စာ စားရင်း တွေ့ဆုံမှုက ဘလွန်းဘက်ဂ် ကို မတ်ကိန်းရဲ့ ဒုသမ္မတ အဖြစ် စာရင်းဝင်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း စွပ်စွဲချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
၂၀၁၂ သမ္မတရာထူးအတွက်ပြုလုပ်သည့် စည်းရုံးလှုံဆော်မှုများနှင့်ပက်သက်သော ထင်မြင်ယူဆချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မေးမြန်းမှုကို ဘလွန်းဘက်ဂ် က “ ရှေ့ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့စိတ်ကူးအကြံအစည်ကတော့ သူစိတ်ထဲမှာ သိပ်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူး” လို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁ဝ အောက်တိုဘာတွင် …. ၂၀⁠၀၈ ခုနှစ်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Michael ဘလွန်းဘက်ဂ် အား အထူးရွေးချယ်ခဲ့သော ကော်မတီသည် ၂၀၁၂ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဘလွန်းဘက်ဂ် အား ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်များက ဘလွန်းဘက်ဂ် သည် ရွေးကောက်ပွဲ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ဇွဲမလျှော့ပဲ အတင်းအကြပ် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုက်ကယ်လ်_ဘလွန်းဘက်ဂ်&oldid=705033" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။